COVID-19: Ma helayaa (lacag) jeeg? | LawHelp Minnesota
COVID-19: Ma helayaa (lacag) jeeg?
Markii ugu dambeysay ee wax la soo geliyey: 2020/8/24
Ciddee xaq u leh?
intooda badan Dadka Mareykanka (U.S.) ee ay soo gasho lacag ka yar lacag go’an oo macruuf ah ayaa xaq u leh.
Xaq baad u leedahay:
Hadii aad canshuur-celin xareysay sannadihii 2019 ama 2018. Wali waad xareysan kartaa canshuurta sannadka 2019
Dakhligaagu uu ka hooseeyo habraacyada lacagta lagu bixinta.
$75,000 sannadkii shakhsiga kaligii ah
$150,000 lamaanayaasha isqaba ee wadarta u xareeysta canshuurta
Dadka dakhligoou intaa ka sareeyo waxa ay heli lacag intaa ka yar ama waxbaba ma heli doonaan. Eeg Akhbaarta IRS (IRS information) si aad u hesho faah-faahin dheeraad ah.
Xataa hadii dakhligaagu yahay $0 xaq waa u yeelan kartaa lacagta
Hadii aan qof kale kugu xareysan foomka canshuurta
Aad leedahay sooshal sakuurati lambar (social security)
Sidee ku helaa lacagtayda?
Lacagta waxaa si toos ah laguugu soo shubi xisaabta (account) bangigaagga ama jeeg ayaa boostada laguugu soo dhigi. Hay’ada IRS ta waxa u qorsheysan inay isticmaasho akhbaartii aad siisay kolkii aad xareysay canshuurtaada sannadkii 2019. Kaliya waxa ay isticmaali akhbaarta cashuurta ee sannadkii 2018 ka hadii aadan wali xareyn canshuurtii 2019.
IRS waxa ay isticmaali akhbaarta canshuur-celintaada si ay lacagta kuugu soo dirto. Waxaa dhici karta inay noqoto qaab ah:
Xisaabta (account) bangigga ee aad siisay IRS tu ay toos ugu soo shubto lacagta
Ciwaankii jeeg canshuur-celinta laguugu soo diray
Ciwaanka ku qornaa canshuur-celintaadii ugu dambeysay
Hadii aadan canshuur xareyn sannadkii 2019 ama 2018, waxaad u baahan tahay inaad canshuur-celin xareysato iminka si aad u hesho lacagta. Eeg qaybaha “Ka waran hadii aanan xareyn canshuurtii 2019 wali? ”ama“Ka waran hadii aanan caadiyan canshuur xareysan?” hoos.
Gooma ayaan heli lacagta?
Lacag bixintu waxa ay bilaabmi qiyaastii bartanka-Abriil. Ka eeg shabakada shabakada (IRS website) wixii soo cusboonaada. Lacagta waxaa la soo diri dhamaan sannadka 2020 oo dhan.
Ka waran haddii aannan xareysan canshuurtaydii sannadka 2019 weli?
Waa aad xareysan kartaa canshuurta 2019 hadda. Hadii aadan xareysan, IRS waxa ay isticmaali akhbaartii canshuurtaada ee sannadkii 2018 si ay u xisaabiso lacagta aad helaysaa inta ay le’eg tahay iyo meesha laguugu shubayo ama laguugu dirayo lacagtaada.
Ka waran haddii aanan canshuur-celin xareysan dhowrkii sanno oo la soo dhaafay?
Lacag ma helaysid inaad canshuur-celin xareyso sannadka 2019 ma ahine.
Ka waran hadii aan qaato manfacyada Sooshal Sakuuratiga (Social Security) aanana caadiyan xareysan canshuur-celin?
IRS tu waxa ay isticmaali akhbaarta sooshal sakuuratiga (social security) si ay kuugu soo diro lacagta. Waxa ay taa u sameyn doonaan mawaadiniinta waayeelka ah, dadka qaata sooshal sakuuratiga (Social Security) iyo hawl-gabka ka shaqeyn jiray xadiidka tareenada ee aan xareysan canshuur-celinta.
Hadii aadan helin $500 ee siyaadadda ah ee ilmo walba lagu qaato sannadkan horaantiisii, IRS tu waxa ay ku siinaysaa waqti siyaado ah oo saa ku sameyso. Isticmaal xiriirkan https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here si aad ugu darto akhbaarta ku saabsan ilmahaaga ugu dambeyn bisha Sebteembar 3p keeda.
Ka waran hadii aanan caadyan canshuur-celin xareysan?
Waxaad u baahan tahay inaad canshuur-celin fudud aad xareysato si aad u hesho lacagta. Akhbaar ku saabsan sida loo sameeyo taa waxaa laga heli doonaa shabakada https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments.
Ka waran hadii IRS tu aysan hayn akhbaarta bangigayga?
Hay’addu waxa ay iminka ka shaqeynaysaa qaab aad adigu uga cusboonaysiin karto akhbaartaada shabakada (internet) si kolkaa aad degdeg ugu hesho lacagtaada. Mar kale ka soo kor laabo shabakada https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments dhowrka asbuuc ee soo socda. Toos ugu shubida macnaheedu waa in lacagta degdeg lagu heli kolka la barbar dhigo jeeg xaashi ah soo dirida.
Ka waran haddii ciwaankaygu isbedelay ka dib intaan canshuurta xareeyey?
Waad ka cusboonaysiin kartaa ciwaankaaga IRS ta. Gal shabakada (website) IRS ta ee ah: https://www.irs.gov/faqs/irs-procedures/address-changes.
Lacag intee le’eg ayaan heli?
Shakhsiyaadka dakhigooda marka laga jaro kharashkooda (ka eeg lambarka AGI foomka canshuur celintaada) uu yahay ilaa iyo $75,000 waxa ay heli doonaan $1,200.
Lamaanayaasha isqaba ee wadarta canshuurta ee wada xareysta ee dakhigeedu marka laga jaro kharashkooda uu yahay ilaa iyo $150,000 waxa ay heli doonaan $2,400.
Ka waran lacagta ilmaha lagu heli iyadana?
Qoyska waxaa lagu siin doonaa $500 ilmo walba, ilmaha xaq u yeelana lacagtaasina waa kuwa yar 17 ka sanno. Iska nimaamka loo adeegsado Lacagta Canshuurta Ilmaha (Child Tax Credit) ayaa go’aamiya ilmaha xaqa u leh in lacagta lagu qaato. Lacagtuna waxa ay ku salaysan tahay canshuurtaadii aad xareysay 2019, iyo akhbaarta ku saabsan ilmaha aad qoray.
Hadii aad xillahaahii is furtaan aadna la wadaagto korinta ilmo waalid kale, isla nidaamka ku saabsan cidda ku xareysanysa ilmaha canshuurta ayaa go’aamin cidda lacagta ilmaha ku soo noqonaysa la siinayo. Eeg warqada xaqaa’iqa ee Ma ku Xaresyan karaa ilmaha Canshuur-celintayda (Can I Claim a Child on My Tax Return).
Hadii aad mas’uul ka tahay ilmo ka weyn 17, kolkaa ma aad helaysid $500 ee siyaadada ah.
Ka waran iyaga ilmaha jaamacadaha ama kuleejooyinka dhigta?
Hadii arday jaamacad dhigta uusan waalidkii mas’uul ka ahayn, kolkaa xaq waxa u leeyahay in lacagtiisa gaar loo siiyo iyadoo lagu salaynayo dakhligiisa u gaarka ah isaga.
Hadii arday jaamacada saacado buuxa dhigtaa uu ka yar 24 uuna ka helo gargaar ka badan kala barow bar waxa uu u baahan yahay noloshiisa waalidkii, kolkaa mas’uul baa laga yahay. Laakiin, waalidku kuma heli karaan $500 ee siyaadadda ah waayo waa uu ka wayn yahay 17 sanno.
Lacagtan manfacyada dowlada ee aan qaataa ma u xisaabin doonaan sidii dakhli oo kale?
Maya. Lacagahan la bixinayaa waa lacag canshuur-celin oo kale ah ee ma aha dakhli. Helida lacagtani ma saameyn doonto manfacyada ay bixiyaan dowladda dhexe iyo kuwa gobolku.
Lacagtan ma laga jari lacago horey la iigu lahaa?
Haa, masaariifta ilmaha ee aan la bixin oo kale. Ma cadda wali in cid kaloo lacag kugu lehi ay ka goosan karta lacagtaada waxa ay kugu leedahay. Hadii ay ciddi isku daydo inay kala baxdo lacagtan xisaabtaadda (account) la soo xiriir xafiiska legal aid. Waxaad ka heli kartaa xafiiskaa: https://www.lawhelpmn.org/so/providers-and-clinics.
Ka waran hadii aniga ama cid kale oo qoyskayga ahi aysan haysan lambarka sooshal sakuuratiga?
Hadii aadan haysan lambarka sooshal sakuuratiga (Social Security), wali waa aad xareysan kartaa canshuur, laakiin lacagtan ma aad heli doontid.
Ka waran haddii aniga ama qof ka mid ah qoyskaygu uusan sharci ku lahayn wadanka?
Dadka aan sharciga lahayni xaq u ma laha in la siiyo lacagtan. Cid walba oo ku qoran warqadaha canshuur-celintu waa khasab inay haystaan sooshal sakuuratiga (social security) lambar magacoodu ku qoran yahay si qoyskaagu lacagta uu u helo. Lambarka sooshal sakuuratigu (Social Security) gu waa inuu yahay mid shaqeynaya.
Hadii aad qabto su’aalo ku saabsan inaad canshuur-celin xareysto iyo in kale ama inaad xaq u ledahay in laguu aqoonsado inaad tahay ‘ajnabi degan wadanka’ (resident aliens) iyo in kale la xiriir Xafiiska Legal Aid ama rugaha canshuurta bilaashka ku xareeya (free tax preparation site).